Ramble & Wawa
Blindcrake, England, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Natasha
Indlu yasepulazini ye-Victorian ehlala eNyakatho Lakes, i-Ramble & Fell iyikhefu elamukelekayo elinakho konke okudingayo ukuze ujabulele indawo yakho yasemaphandleni - yisikhathi sokuphefumula. Jabulela ikhofi lakho lasekuseni elihambisana nokubukwa kweziwa ezinyakazayo futhi kamuva uzithole usuhlanganiswe ama-marshmallows awosa umlilo wangaphandle (ahlinzekiwe). Ikotishi liyindawo ethule yokuphumula elungele imibhangqwana noma amaqembu amancane, nje uhambo lwemizuzu engu-15 ukuya eChibini eliseduze nezitebhisi ezisuka kude nenkaba yasemaphandleni ukuze uyihlole.
Insta - @rambleandfell
Izungezwe izindawo zasemaphandleni ezimazombezombe, iRamble & Fell iyindlu yasepulazini esezingeni eliphezulu enamagumbi amabili egcwele abantu.
Amakamelo okulala amabili akhethwe ngokucophelela ukuze athokomele kahle! Omatilasi baka-Emma namalineni athambile awina umklomelo akuyenga ukuba ulale kuyilapho ukuphuma kwelanga ekuseni kuveza ukubukwa kobubanzi be-Skiddaw.
Sithanda ukuchitha ubusuku engadini ngasemgodini womlilo, ukubuka inkanyezi esibhakabhakeni esingonakalisiwe noma esimweni sezulu esiwugwadule uzosithola sihlanganiswe phambi kwesishisi sezinkuni ngengilazi yewayini.
Ubhavu wethu wokugeza wakudala wama-French osanda kubuyiselwa ubusohambweni lokufika kithi futhi unikeza ngendawo ekahle yokucwila nokuphumuza ngemva kokuhlola I-National Park. Ikhishi lethu elisanda kulungiswa lihlomele ngokugcwele zonke izidingo zakho zokupheka futhi izivakashi zethu zingabheka ngabomvu izinto ezimbalwa ezibalulekile ezitholakalayo lapho ufika.
Zithole ugijima emini ngosuku, uhlola ubuhle obungapheli obunikezwa yi-Lake District noma uma ufuna imisebenzi eseduze nezinga lolwandle, kunezinhlobonhlobo zezimangaliso eziseceleni kwechibi esizokwabelana ngazo lapho uzibhukha. Kanye nezincomo zethu eziyintandokazi zesidlo sasemini esithokomele, izindawo zokudlela zasendaweni nohambo lwasemini sizokuthumelela uhlu lohambo lwethu esiluthandayo namagugu afihliwe. Ukuhamba esikuthandayo ngasohlangothini lolwandle kungatholwa imizuzu nje ngemoto, amaflaski kashokoledi oshisayo athathwa njengesidingo ngenkathi ubuka ukushona kwelanga phezu kwe-Soleway Firth ngase-Scotland.
Ngizotholakala ngemiyalezo ye-airbnb kanye nemininingwane yokuxhumana ukuze ngigcinwe
uzohlinzekwa ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Hlola ezinye izinketho ezise- Blindcrake namaphethelo